Linux 5.7: icho chitsva chishamiso chinogona kuonekwa neichi chitsva kuburitswa | Kubva kuLinux
El Linux kernel 5.7 iri pano, chimwe chezvishamiso zvazvino maererano nemahara kernel kuburitswa. Kana iwe uchida icho, iwe uchafanirwa kumirira kuti chiwanikwe mune repos yewaunofarira distro uye kuti iiswe otomatiki neiyo yekuvandudza system, kana iwe unogona zvakare kurodha pasi, kumisikidza, kuumbiridza uye kuiisa wega kubva kernel.org.
Iyi Linux 5.7 kernel inouya nenhau huru uye zvitsvaKubva kuApple nekuchaja nekukurumidza kune vatyairi vepamutemo veIntel Tiger Lake mifananidzo. Kana iwe uchida kuziva zvese zvinovanzwa iyi nucleus, ndinokukurudzira kuti urambe uchiverenga ...
Izvi zvinotevera zvinofanirwa kujekeswa maficha anokwezva kutarisisa mune ino Linux 5.7 kuburitswa:
Kubatanidzwa kwevatyairi ve12th Gen Intel Tiger Lake yakasanganiswa mifananidzo.
Tsigiro ye AMD Ryzen 4000 "Renoir" mafoni emagetsi.
Mutsva mutyairi weSamsung exFAT mafaera masisitimu anotsiva yapfuura. Izvo zvinoita kuti Linux 5.7's exFAT tsigiro ive yakanaka.
Zstd compression inotsigira iyo F2FS.
Mutyairi wekukurumidza USB kuchaja kweApple zvishandiso.
Kunatsiridzwa kwekutsigira iyo Qualcomm Snapdragon 865 mutsara weSoCs, kuwedzera kune kumwe kugadziridzwa kweArm-based zvishandiso senge iyo Pine Tab uye Pinebook Pro.
Kushandiswa kwegavhuna weSchedutil weIntel P-State, kuvandudza kugona kwevatungamiriri veCPU cores.
Kugadziridza kwekuita kwe / dev, SELinux, nezvimwe zvinhu.
Kana izvozvo zvichiita sezvishoma kwauri, Linux kernel chigamba chiri kukurukurwa yeshanduro 5.7 iyo inogona kushandiswa kusimudzira mashandiro emuno maMicrosoft Windows mitambo kana uchishandisa Waini. Anogadzira Collabora anga ari iye akagadzira iyi nhaurirano nyowani kubatsira nyika yekutamba kuburikidza neWine.
Mhedzisiro yacho yaizove inowirirana kuenderana uye kudzikisira mashandiro ekuita kune mazhinji emazuva ano mitambo yemavhidhiyo ine chekuita nayo syscalls kana system yekufona vanoita rudzi urwu rwe software.
Mamwe ruzivo nezve chigamba pano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » GNU / Linux » Linux 5.7: chishamiso chitsva chinoratidzwa
Monado 0.2 inosvika nerutsigiro rwematanho-akawanda, Vive Wand uye Valve Index uye nezvimwe